Stellar Tactics a stellar yekuongorora RPG inouya kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Unogona kutowanikwa Stellar Tactics pane Steam Kune mamwe mapuratifomu, kutaura chokwadi avo venyu vari kufambirana nenyika yekutamba vachange vanzwa nezvazvo kubvira gore rapfuura. Iyo nzvimbo yekutsvaga RPG (Role-Playing Game) inoronga kuunza rutsigiro rweLinux. Mutambo wevhidhiyo unoitirwa vateveri veRPGs uye nesainzi fungidziro, nekuti zvinoenderana neizvi kune zvepasirese izvo zvinodzokororazve, zvichikubvumidza iwe kuti uongorore zvakasikwa maunogara hupenyu hwakawanda.
Zvakanaka, isu tese tinozviziva izvozvo zvirongwa zvekutanga Kubva pane studio kana musimudziri kutakura zvigadzirwa zvavo kuLinux kusvikira zvazova chokwadi kune chadenga chakati kurei seicho chinovimbiswa nemutambo. Mazhinji emapurojekiti akagumburwa nechimwe chikonzero kana chimwe uye pakupedzisira haasvike kuLinux sezvazvakaitika nevamwe vacho, kungave nekuda kwekushaikwa kwemari, vanogadzira kana kufarira pachikuva cheLinux. Nekudaro, zvinogara zvakanaka kufunga nezveLinux, kunyangwe kana chirongwa chikasaguma mukuita, nekuti makore mashoma apfuura zvaive zvisinga fungidzike kufunga nezvazvo ...
Zvakanaka, pa Twitter yeakaundi nhoroondo yeimwe yevagadziri anobatanidzwa akataura kuti mutambo wevhidhiyo mushanduro yayo yeLinux ndeye «Kushanda zvakakwana nedambudziko rimwe kana maviri madiki. Kunyangwe ichida bvunzo dzizere. Handina chokwadi kuti zvichaitwa riini.«. Izvi, kune rumwe rutivi, zvinojekesa kuti vari kushanda pazviri, uye kwete izvozvo chete, asi basa rakasimukira uye ririkutoshanda mukushaikwa kwekukwenenzvera iwo matambudziko ataurwa, asi izvo zvaisingatenderi kuratidza zuva iro richaonekwa. Asi zvinonzwika kuvimbisa ...
Zvakanaka, chero nguva, Chii chatichawana? Zvakanaka, manzwiro mazhinji mune yechinyakare RPG ine nyaya yakanaka yekutaura, kurwisa zvine hungwaru, kuongorora munzvimbo yakavhurika, uye kudiwa kwekurarama mune ino nyika ine hukasha, iyo yauchazoda kukudziridza hunyanzvi hutsva hwechikwata chako uye uine maturusi akanaka. ngarava). Zvese zvakasikwa zvakakura, zvine gumi nematanhatu masolar system uye mamirioni emapuraneti kuti uwane, saka hauzobhowekana mune izvo. Iwe uchapedza maawa uchirwa, uchiongorora, uchitengesa, uye uchivaka pati yako kugadzirira matambudziko matsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Stellar Tactics a stellar yekuongorora RPG inouya kuLinux